Kani waa mobile-ka labalaabmaya ee loo yaqaan 'Xiaomi' Androidsis
Xiaomi ayaa naga yaabisay soo jeedintiisa oo ah moobil isku laaban in horey u muujiyey dhowr toddobaad kahor. LetsGoDigital wuxuu lahaa fikrad aad u fiican oo ah sameynta isku mid ah mobilada ay soo bandhigtay Xiaomi si ay noo siiso fikrad macquul ah oo ku saabsan waxa sumadda Shiinaha ay noo keeni doonto.
Markaa waa muuqaal ahaan waxa aan ka ilaalin karno bandhiggaas ee Xiaomi ay ku sameysay taas oo kaliya moobiilka isku laaban la arko oo aan marna laga faalloon wax ku saabsan noocyadiisa suurtagalka ah. Wax yar ka dib MWC, waxaan ku sii soconeynaa wadada aan u socono waxa noqon doona isbedelka soo socda: taleefannada gacanta ee isku laaban.
Waxa ay kooxdaasi samaysay ayaa ah inay fiidiyowga qaadaan taas oo aad ku aragto mid ka mid ah ragga Xiaomi oo leh mobilada isku laaban oo samee isku mid si aad noo tusto sawirro kala duwan oo leh aragtiyo iyo xaglo kala duwan.
Waa mobiil shaashad laba laab leh leh. Taasi waa, waxaa lagu kordhin karaa laba qaybood si aan uga tagno sida aan jecel nahay hadba baahida xilligan jirta. Hal hab ayaa noqon kara midka caadiga ah ee mobilada, inta aan laalaabeyno waxay noo ogolaaneysaa inaan leenahay kiniin ka weyn. Intaas oo kaliya maahan, laakiin waxaan u isticmaali karnaa baalasheeda 2 si aan ugu dhigno qaab aad u kala duwan taasna waxaa si dhammaystiran looga arki karaa sawirrada la wadaago.
Sikastaba, in kastoo aan helno fikrad muuqaal ah oo dheeri ah oo ah waxa moobilka laabmaya ee Xiaomi noqon doono, runtii ma ogin batarigiisa, qeexitaankiisa iyo faahfaahintaas oo macnaheedu noqon karo in maalinba maalinta ka dambeysa ay ka wanaagsan tahay inaan ku sii wadno casriga cusub ee casriga ah.
Waxaan sidoo kale rajeyneynaa Mobilada Samsung ee isku laaban taasoo sida la filayo lagu dhawaaqi doono 20-ka Febraayo. Marka waxaan haysanaa usbuucyo iyo bilooyin iswaafajinaya mobilada si aan u noqono sheyga xiga ee rabitaanka boqollaal kun oo dad ah oo adduunka ku nool. Hadda waxaan la harnay Xiaomi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Bixiyeyaasha maxaa noqon doona mobilada isku laabma Xiaomi
Baadhitaanka AR ayaa dhawaan laga heli doonaa Khariidadaha Google ee loogu talagalay adeegsadayaasha la xushay